Vavaka amin'i satana. ? Ho an'ny fitiavana, manjaka amin'ny olona sy vola
Vavaka ho an'i Satana. Amin'ireo vavaka rehetra misy, dia afaka milaza isika fa ny vavaka ho an'i satana Voatanisa, ho an'ny maro, amin'ny maha-hafahafa azy ary izany no mahatonga ny olona hahatsiaro hakamoana manokana amin'ity vavaka ity nefa ny marina dia tsy misy vavaka tsy ratsy satria fihetsika ara-panahy tsotra izay atao avy amin'ny fo sy fomba fivoahana amin'ny toe-javatra izay, tsy azontsika atao ny tsy ho tanteraka.
Satana dia mifandray amin'ny haizina, miaraka amin'ny hery maizina na mivantana amin'ny faharatsiana.
Izany rehetra izany dia ao anatin'ny tontolo ara-panahy izay misy ary mila manana fahalalana isika satria zava-misy izay tsy ahafahanao mandositra.
1 Vavaka ho an'i Satana. Iza moa i Satana?
2 1) Vavaka ho an'i Satana hitiavana sy hanjaka amin'ny olona iray
3 2) Vavaka ho an'i Satana hangataka famindram-po
4 3) Vavaka ho an'i Satana hisarika ny olon-tiana
5 4) Vavaka mba hangatahana amin'i Satana hanana vola
5.1 Mety handratra ahy ve ny vavaka?
Vavaka ho an'i Satana. Iza moa i Satana?
Azontsika atao ny mandray ny tantarany ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay voalaza fa anjely avy any an-danitra izy, indrindra fa ilay niatrika ny fanompoam-pivavahana tamin'Andriamanitra mahery sy namorona ny zavatra rehetra.
Ny tantara dia nilaza fa i Luzbel, izay anarany hatrany am-piandohana dia feno avonavona ary naniry ny hanaovana ny fanompoana rehetra izay natao tany an-danitra ho azy koa. Noho ity farany dia inoana fa anjely tsara tarehy izy.
Nahatonga ady tany an-danitra izany rehetra izany Nivadika i Satana ka noroahiny niaraka tamin'ny demonia izay noheveriny fa marina ary nanomboka teo izy dia naman'ny tontolon'ny maizina.
Satana dia noforonin'Andriamanitra izay feno fahatsapana ratsy ary noho izany antony izany dia nahazo sazy izy.
1) Vavaka ho an'i Satana hitiavana sy hanjaka amin'ny olona iray
«Juste amancebo, amancibo, tahaka ny namitanao ilay zazalahy, tiako ho tianao aho (hoy ny anaran'ilay olona)Aza avela hipetraka eo amin'ny seza, na eo am-pandriana, na miaraka amin'ny vehivavy, izay tsy misy fotoana milamina!
Lucifer, Lucifer, toy ny nandroahanao ny olona efatra arivo ho any amin'ny helo, tiako ianao hitarika ahy mba (hiteny ny anaran'ilay olona), raha matory izy, aza avela hilamina, hameno azy ny caltrops ary ny ondana mameno azy amin'ny vato Lucifer, tsia avelao ary!
Raha ny rambon'ny devoly izay lava indrindra dia tiako ianao afatotra ahy (hiteny ny anaran'ilay olona); amin'ny fivoriana mangina tsy misy, mandra-piraisana tanteraka amiko.
Mivavaha am-bavaka amin'i satana hanjaka amin'ny finoana lehibe.
Zava-dehibe loatra ny fitiavana ho an'ny olona ary izany no antony mahatonga an'io vavaka manokana io no ahazoantsika ny fanampiana ilaina hitadiavana azy na handraisana karazana fanampiana hafa mba tsy hisian'ny fitiavana eo amin'ny ilantsika amin'ny fotoana rehetra.
Ny tanjona maharitra fito na sivy andro dia azo atao ary na dia mba hananganana alitara manokana na hanolorana fanatitra, kanefa izany rehetra izany dia tokony hatao miaraka amin'ny finoana am-po.
2) Vavaka ho an'i Satana hangataka famindram-po
«Mpanazava, hendry indrindra sy tsara indrindra amin'ny anjely, izay nampahorian'Andriamanitra.
Ry Anjelin'ny sesitany, izay iharan'ny tsy rariny! Ary izany, mbola lany daty, manavao ianao ny hery ary ny fanantenan'ny tanàna very izay tsy manana làlana tsara. Mamelà heloka ny olona rehetra izay amin'ny anaran'Andriamanitra manao fahotana mahatsiravina, ry anjely lehibe manafaka antsika amin'ny fihatsarambelatsihy.
Oh, ianao izay mahalala ny zava-drehetra, ilay anjely Lucifer lehibe, izay, amin'ny fiainana dia manome fanantenana ary mahatakatra ny tsy rariny nataon'Andriamanitra.
Ianao izay olona miaro ny olombelona lehibe indrindra miady amin'ny famoretana, hanafaka anay amin'ny fahalalana sy ny fahalalahana asehon'ny fiainana.
Tsy misy olona mahalala ny fanaintainan'ny olombelona fa ianao ilay anjely lavo izay miaritra ny sazin'ny andevo lehibe.
Afaho amin'ny ratsy izahay, afaho amin'ny fampahoriana ary omeo anay ny fahafahana nomenao ady marina amin'ny anaran'ny zanak'olombelona sy ny famoronana.
Iza no tsy miankohoka amin'ny seza mitsara ny velona sy ny maty, tariho izahay ambanin'ny hevitra ara-moraly toa anao, ho tonga olona tsara sy mahitsy izay afaka mitondra ny hazavana omenao.
Aza adino ny aminay olombelona izay isaoranay anao, izahay dia Ianao, philanthropist tsara.
Ianao izay manana ny fahalalanao lehibe dia mampiseho ny haren'ilay nitondra mahery sy ny fahazavan-tsaina, aza avelanao noho ny famindram-pon'ny fanandevozana sy ny tsy rariny no manome anay fahalalana hahafahanao hanafaka antsika amin'ny gadra mampahory nomen'Andriamanitra anay sy nanerenay hitondra.
Misaotra anao mandrakizay Mpitondra Mazava Lucifer. »
Tsy misy tsara noho ny vavaka angatahana amin'ny olona iray izay miditra amin'ny tontolo ara-panahy ary ao amin'io satana io no misy tombony.
Ity vavaka ity mety ho azo atao na rahoviana izany izany no ilaina na inona na inona zava-mitranga manodidina antsika satria fihetsika ara-panahy izay anananay, raha tiantsika, dia tsy afaka mampiasa ny saintsika fotsiny isika.
3) Vavaka ho an'i Satana hisarika ny olon-tiana
«Toa an'i Caiaphas, satana, Fierabrás ary ny lehiben'ny helo izay manjaka amin'ny olona rehetra, dia mitondra (anaran'ny olona hamatotra azy) mitondra ahy io zanak'ondry io, nogadraina ambanin'ny tongotro havia.
(Anaran'ny olona hamatotra azy) Tsy ho very ny vola eo an-tananao sy eo an-tananao, tsy hangetaheta ianao na tsy hifarana akory, ny basy sy ny antsy tsy handratra anay mihitsy, ireo fahavaloko tsy ho afaka hampanjombona ahy, handresy ny tolona aho miaraka am-pahefana. ny osilahy mainty mahagaga.
(Anaran'ny olona hamatotra azy) miaraka amin'ny roa aho mahita anao, miaraka amin'ny telo no tratrako ianao. Miaraka amin'i Caiaphas, satan, Fierabrás. »
Amin'ireny fotoana ireny izay nanalavitra ilay olon-tiana antsika, rehefa lavitra ny olana na ny olana dia manalavitra antsika amin'ilay olona lasa sakaizantsika isika, dia afaka manainga io vavaka miavaka io mba hamerenany io fitiavana io amintsika. Mirary antsika.
4) Vavaka mba hangatahana amin'i Satana hanana vola
Anjely mahery sy lehibe maizina, feno fahendrena ianao ary mahafehy izay tianao.
Miangavy anao aho mba hifona ho ahy anio ary hameno vola amin'ny fiainako ny fiainako, maniry aho raha avy ny orana eo anoloako.
Fantatrao izay mijaly noho ny hafa, koa tsapako satria mandany ny zava-drehetra ny vola.
Omeo ity faniriana lehibe ity aho ary hanaraka anao hatrany am-paran'ny tany raha mangataka amiko ianao dia homba anao aho.
Hanaraka ny dianao aho ary ny lalanao satria fantatro fa tsy ho avelanao velively ny vola eo anilanao ary hanan-karena aho.
Fantatro fa maro ny lalana mihidy ho ahy ary tsy afaka manokatra azy ireo aho fa mangataka anao miroborobo.
Fenoy vola be ny tranoko mba hahafahan'ny zanako miaina hanjaka ao ambany fahefanao.
Samy hanaraka ny lalanao daholo isika satria lalana mankany amin'ny fahombiazana ary izany no tadiavintsika.
Miangavy anao izahay mba hamela anay ho eo anilanao ary tsy hiala mihitsy satria ianao no Voahosotra Ilay Mpanjakanao ho an'i Satana
Ny vola dia iray amin'ireo antony lehibe indrindra mampanahy indrindra ao amin'ny mponina ankehitriny maneran-tany satria tsy maintsy ekena fa saika hividianana vola daholo ny zava-drehetra.
Amin'ireto fotoana izao mandalo fotoan-tsarotra sarotra isika, famango-bavaka hangataka vola hialana amin'ny tanantsika dia mety ho fihetseham-po ilaina amin'ny fahitana fahagagana ara-bola ilaina.
Afaka mangataka vola isika, mba hahatratrarana ny tanantsika, mba hananantsika fahazavana amin'ny fotoana anaovana fifampiraharahana na noho ny hoe misy vintana eo anilantsika ary azontsika atao foana, azo ekena avokoa ireo vavaka rehetra ireo.
Mety handratra ahy ve ny vavaka?
Tsia, ny vavaka Izy ireo tsy afaka handratra antsika.
Na izany aza, tsara ny manonona fa ireo dia tokony hatao miaraka amin'ny andraikitra lehibe sy andraikitra lehibe satria ny zavatra angatahina aminao dia mety handratra ny olon-kafa ary amin'ity lafiny ity dia tokony hitandrina mafy isika mba handratra antsika na iza na iza amin'ny fangatahana.
Tsy maintsy miahiahy momba ny fahafantarantsika ny fangatahana isika ary mankahery ny tenantsika mba hanaiky ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hanao vavaka mivaingana na feno fitiavan-tena.
Mahalalaha herin'ny vavaka mba hampiantso an'i Satana.
Vavaka 4 ho an'i Saint-cypianian